Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Kevin Gameiro Tantara momba ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny mpikarakara klinikana malaza amin'ny anarana; "Kev". Ny tantaran'i Kevin Gameiro momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra firy momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony ny fanarenana azy saingy vitsy no mihevitra ny Bio Bio Kevin izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Kevin Gameiro Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-pitiaviana bebe kokoa -Voalohandohan'ny fiainana
Kevin Gameiro dia teraka tamin'ny 9th ny volana May 1987 tao Senlis, kaominina ao Oise, 35 kilometatra (22 mi) avaratr'i Paris France. Izy dia teraka tamin'ny Mr sy Dominique Gameiro ray aman-dreniny.
Avy any Portiogaly ny ray aman-dreniny. Nanomboka ny lalao baolina kitra nilalao ho an'i ES Marly-la-Ville izay tsy lavitra ny tanànany frantsay tamin'ny faha-enina taonany. Talohan'ny hamadihana ny 13 araka izay aseho etsy ambany, dia nisafidy ny hijanona ao amin'ny faritra izy amin'ny alàlan'ny famindrana ny klioban'ny tanora. Amin'ny maha-13 taona azy dia efa niaina i Kevin, nihinana sy nandihy baolina.
Nandritra ny fotoana naha-lehibe azy, dia i Spyderiro mpilalao fahiny sady mpanafika RC Strasbourg teo aloha Jacky Duguépéroux izay nanoro hevitra ny mpilalao hanatevin-daharana ny kliobany taloha Tao amin'ny 2004, Gameiro dia nahavita ny diany nankany amin'ny klioban'ny Alsatiana izay mpilalao tanora. Izany no nahatonga ny fahamatorana, araka ny sary etsy ambany. Nianatra ny fahaizany ara-pahasalamana tao amin'io klioba io izy.
Taorian'ny nahombiazana tao Lorient tamin'ny 2008 ka hatramin'ny 2011, dia nanjary fantatra ho mpilalao sarimihetsika manerantany i Kevin. Tamin'ny Jona 10, 2011, Kevin dia nanaiky ny fepetra navoakan'i Paris Saint-Germain ary nanao sonia fifanarahana nandritra ny efa-taona ho an'ny vidin'ny 11 tapitrisa euros miaraka amin'ny safidy ho an'ny bonus. Ny andro niainany tao amin'ny klioba dia nozaraina taorian'ny fanaraha-maso 2011 nataon'ireo tompon-trano Qatar.
Taorian'ny fandinihana ny fifaninanana tamin'ny July 25, 2013, dia nifanaraka tamin'ny klioba Espaniola Sevilla FC i Kevin ary nanasonia fifanekena dimy taona mendrika ny 10 tapitrisa euro. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Kevin Gameiro Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-pitiaviana bebe kokoa -Relationship Life
Love at voalohany Ny fahitana fotsiny dia mitranga ao amin'ny 11% amin'ny tranga ary izany dia matetika amin'ny lehilahy noho ny vehivavy. Nanjary tia an'i Lina i Kevin.
Izy ireo dia samy nanan-janaka roa lahy niaraka tamin'i Aaron sy Ayden. Nanambady an'i Lina i Kevin rehefa avy niteraka ny zanany roa. Fampakaram-bady miafina izay nankafizin'ny ankamaroan'ny fianakaviany teo akaiky.
Kevin Gameiro sy ny zanany lahimatoa, i Aaron dia tena akaiky azy. Manandrana ny hanaraka ny dian'ny rainy i Aaron Gameiro mba ho mpilalao baolina kitra.
Kevin Gameiro Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-pitiaviana bebe kokoa -Fiainana manokana
Kevin Gameiro dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
hery: Kevin dia azo itokisana amin'ny asa aman-draharahany. Manam-paharetana, mahasoa, manolo-tena ary farany, tena tompon'andraikitra izy.
fahalemena: Kevin dia mety ho mafy orina, be herimpo ary tsy afa-po.
Inona no nolazain'i Kevin Gameiro: Tiany ny manafina ny maha-izy azy amin'ny vahoaka, tia ny zaridaina, mahandro, mozika ary am-pitiavana.
Izay tsy tiany i Kevin: Miova tampoka eo amin'ny fiainany ny olona izay tiany, fifandraisana ary fahasarotana amin'ny asa sy tsy fahampian-tsakafo.
Raha fintinina, dia tena azo ampiharina sy tsara i Kevin. Izy no olona izay maniry foana ny hijinja ny vokatry ny asany.
Kevin Gameiro Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-pitiaviana bebe kokoa -Car Choice
Kevin Gameiro dia mpankafy an'i Audi R8 izay mandany vola amin'ny 135,000 Euros. Heveriny ho toy ny "Fiara mitondra hazavana ho an'ny tenany".
Kevin Gameiro Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-pitiaviana bebe kokoa -Family
Kevin Gameiro dia avy amin'ny fianakaviana iray ao amin'ny kilasy antonony, talohan'ny nilalaovan'ny baolina farany. Manana lova portiogey izy amin'ny alalan'ny raibeny. Izy dia avy amin'ny fianakaviana iray manana endrika endrika maotina.
Nifindra tamin'ny 1960s sy 1970 ny fandevenana an'i Portigogère de Kevin Gameiro tamin'ny ankapobeny, mba handosirany ny didy jadona sy ny filazana, ary ny hitadiavana ny fiainana an-davan'andro. Ny ankamaroany dia nanomboka niasa tamin'ny fanorenana.
Kevin Gameiro Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-pitiaviana bebe kokoa -Portiogaly diso fanantenana
Gameiro dia afaka nisolo tena an'i Portogaly teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tao amin'ny 2009, i Carlos Queiroz, mpitantana, dia nanambara fa ny Gameiro dia "Mpilalao mahaliana" ary izy "Te hiresaka aminy" mikasika ny fisoloana an'i Portiogaly. Na izany aza, nilalao ny lahateny i Gameiro, nilaza fa izy "Tsy manana fifandraisana amin'ny firenena" ary naleony nisolo tena an'i Frantsa.
Kevin Gameiro Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-pitiaviana bebe kokoa -Nahoana izy no nifidy an'i Athletico Madrid
Amin'ny teniny ..."Manolotra ny tsara indrindra amin'ny fifaneraserana i Atletico Madrid. Ankoatra izay, nandritra ny vanim-potoana maro, ny ekipa dia nanana ny lazany. Talohan'ny nahatongavako dia nilazana aho fa toy ny fianakaviana lehibe izany. Nisy ny fahafahana hiaraka amin'i Barcelona, ​​saingy ao an-tsaiko dia mazava fa te-hiaraka amin'ny Atletico aho rehefa hifandray amin'ny Atletico aho. Ny avonaviko dia nikambana aho satria mahatsapa fifandraisana bebe kokoa amin'ny mpankafy azy ireo "
Gameiro koa dia nanambara fa mety hahazo vola bebe kokoa izy amin'ny handao an'i Espana, saingy tsy nanomana fikasana hanao izany.
Hoy izy nanohy: "Nataoko izay hahafantarako ny tolotra mahafinaritra amin'ny lafiny ara-bola saingy te hijanona eto Espaina aho. Mahatsiaro tena tsara aho eto. Ny fianakavianay koa dia manao ary ny La Liga no iray amin'ireo ligim-piarovana.
Kevin Gameiro Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-pitiaviana bebe kokoa -Fanapahana henjana
Kevin Gameiro dia olona iray izay tsy te ho voasoloina indrindra raha toa ka milalao tsara amin'ny lalao izy. Tao amin'ny 2017, naneho ny hatezerany i Kevin tao amin'ny fihaonamben'ny UCL taorian'ny adihevitra taorian'ny fifidianana tao amin'ny 71st minitra tao amin'ny fandreseny 4-2 Champions League momba an'i Bayer Leverkusen.
Ny mpikatroka Frantsay, izay nametraka tanjona voalohany Antoine Griezmann talohan'ny fametrahana ny sazy an-tranomaizina 58th minitra, dia nilaza tamin'i Marca taorian'ny lalao: "Eny, tezitra aho satria te hilalao ny lalao rehetra rehefa milalao tsara ianao. Tezitra kely aho, fa ny tena zava-dehibe dia ny fandresen'ny ekipa. Ity dia baolina kitra, izay ny mpanazatra [Diego Simeone] manapa-kevitra ary izany dia ".
FACT CHECK: Misaotra noho ny famakiana ny tantaran'i Kevin Gameiro momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.